ट्युमेनको किनारमा | मझेरी डट कम
kbs — Sun, 06/06/2010 - 18:41
मानवअधिकार हनन सम्बन्धी रिपोटिङका सिलसिलामा रहेका दुई अमेरिकी पत्रकार लउरा लिङ र युना लिलाई उत्तरकोरियाको सुरक्षाकर्मीहरूले यही ट्युमेन नदीको किनारमा पक्राउ गरेका थिए । अहिले उत्तरकोरियामा बन्दी जीवन बिताइरहेका लिङ र लिले आफूहरूले चिनियाँ भूभागबाट नै दृश्य खिचेको बताए पनि त्यसको कुनै सुनुवाई भएन । बरु उल्टो पोङयाङ अदालतले उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै १२ वर्ष श्रम शिविरमा पठाउने फैसला सुनायो । यी दुवै अमेरिकी पत्रकारले गैरकानुनीरूपमा उत्तरकोरिया प्रवेश गरी अस्वीकार्य काम गरेको पोङयाङ अदालतको फैसलामा उल्लेख थियो ।
यो घट्नाले विश्वभरिका पत्रकारहरूमाझ सनसनी नै फैलियो । प्रेस स्वतन्त्रता र निर्वाध समाचार सङ्कलन गर्न पाउने विश्वव्यापी मान्यतामाथि यो दुःखद आक्रमण थियो । ती दुवै पत्रकार लिङ र लि मानव तस्करहरूले उत्तरकोरियाली महिलामाथि गर्ने दुव्यवहारका बारेमा अनुसन्धान गर्दै थिए ।
पोङयाङ अदालतको फैसलाको तीन महिनापछि अमेरिकी एक संस्थाले दक्षिण एसियाका पत्रकारहरूको टोलीलाई ट्युमेन नदी किनारमा पुर्यायो । पाकिस्तान, श्रीलङ्का, भारत र नेपालका पत्रकारहरू सम्मिलित त्यो टोलीमा म पनि थिएँ । र मेरो साथमा थियो, क्यामरामेन अशोक सिलवाल ।
पहिले त मैले जिङका कुरामाथि विश्वास गरिहालिन् । काठमाडौँका विभिन्न अधिकारवादी संस्थाहरूले महिला र बालबालिकालाई घोकाइघोकाइ रुन र बोल्न सिकाए जस्तो त यो होइन, भन्ने पनि लाग्यो तर जब जिङको आँखामा सत्यताको चीसो स्केच देखेँ तब मलाई विश्वास भयो । पीडालाई जति नै लुकाउन खोजे पनि साना दुई आँखाका किनारमा पीडाहरू प्रष्टिहाल्दा रहेछन् । भएको पीडालाई आँखामा लुकाउनु र नभएको पीडालाई आँखामा देखाउनु कहाँ सकिन्छ र ?
'ट्युमेन नदी तरेपछि हामी चीनको एक घरमा आइपुग्यौँं ।' जिङले उत्तरकोरिया छोड्दाको क्षण सम्झिन्, 'त्यो परिवारले हामीलाई स्वागत गर्यो । उनीहरूको कुराले मैले काम पाउँछु भनेर खुसी पनि लागेको थियो ।'
तर काम मिलाई दिनुभन्दा त्यो चिनियाँ परिवारले जिङलाई मानव तस्करको जिम्मा लगाई दियो । तस्करले एक चिनियाँ किसानसँग मोटो रकम लिएर जिङलाई बेचिदियो । जिङले आफ्नो इच्छाविपरीत त्यो किसानसँग बिहे गर्नुपर्यो ।
महिला हुनु नै के दोष हो ? विश्वभरिका महिलाका समस्यामा किन यति धेरै
समानता ? महिला भनेको के पीडाका पुञ्ज हुन् ? हे दैव, महिलामाथि यति धेरै अन्याय किन ? नेपाल, भारत, पाकिस्तान या ट्युमेनको किनार सबै स्थानका महिलाका पीडा किन उस्तै र एउटै ?
आधुनिक युगको यो दासप्रथाबाट विक्षिप्त महिलाहरूलाई सहयोग गर्दै चीन र उत्तरकोरियाको सिमानामा चार वर्ष बिताइसकेकी लाराले भनिन्, 'व्यापारीले पसलमा सामान सजाएझैँ हुन्छ । महिलाहरूलाई लहरै राखिन्छ । उमेरअनुसार मिलाइन्छ । मेकअप र राम्रा लुगामा सजाएपछि मान्छेहरूले मोलतोल गर्न थाल्छन् । सबैभन्दा बढी मोल जसले दियो उसैले रोजेको महिला पाउँछ । ती महिलालाई पहिले तस्करले बलात्कार गर्छन् । त्यसपछि बाँचुन्जेल किन्ने मान्छेको यौनदासी बन्नुपर्छ ।'
'ट्युमेन पार गर्न निक्कै दुःख गरियो र यहाँसम्म आइयो । यहाँ पनि दुःख मात्र पाइयो । फेरि दुख्ख नै लिएर किन
फर्किनु ? अब यतै मर्ने' उनले आँसु पुछिन् । आफैँसँग आफ्नै भाषामा बोलिन् -सुस्तरी, 'साल्याजुनुङ्गो आन्न साल्याजुनुङ्गो मुग्रेस्सोनिकान् ।'
'यो जिङको थेगोजस्तै नै हो । आफ्नो जीवनका बारेमा बोल्नुपर्यो कि उनी सधैँ यसै भन्छिन् । उनको यो कोरियन लबजको अर्थ हुन्छ- हामी बाँचेको नबाँचेको केही थाहा छैन ।'
कस्तो दार्शनिक शैलीको जवाफ । सायद पीडाले मानिसलाई दर्शनको नजिक पुर्याउँछ । मलाई यो वाक्य पहिले कतै सुने जस्तो लाग्छ । सम्झिने कोसिस गर्छु । कोरियाली लवजमा नै मैले यो वाक्य यसैगरि कतै सुनेको छु । एक कोरियाली किशोरीबाट ।
'के तिमी नेपाली हौ ?' उनले मलाई सोधिन् । जिङको यो लवजमा म उनलाई ठम्याउँछु, 'हो, म नेपाली हुँ । राप्तीको किनार र उडेका चराहरू याद छ,
तिमीलाई ? त्यही चराहरू देखेर एक शीतल साँझ तिमीले वाङलाई सम्झेकी थियौ ।' म रोमाञ्चित हुन्छु, जिङसँगको भेटले । यो कस्तो संयोग ।
'तर अब केही महिनामै म धनी हुन्छु ।' उनी केही उज्याली भएकी थिइन्, 'म छिट्टै वाङ लिसँग बिहे गर्दैछु र जोनचुङमा सर्दैछु । त्यहाँ उसले आफ्नै काम भएको कारखानामा मेरो लागि काम खोजिदिइसकेको छ ।'
त्यसपछि मैले उनले मन पराएको टिर्सट तीनवटा किनिदिएको थिएँ । एउटा उनको लागि, अर्को वाङको लागि र अर्को एउटा सानो टिर्सट भविष्यमा उनीहरूबाट जन्मने बच्चाका लागि । मेरो दुवै हात उनले 'खाम्सामिदा' भनेकी थिइन् । खाम्सामिदा भनेको धन्यवाद रहेछ । कोरियनहरूले आफ्नो पि्रय मानिसलाई धन्यवाद भन्नुपर्यो भने दुवै हात समातेर खाम्सामिदा भन्ने गर्दारहेछन् ।
'तिमीसँग यसरी यहाँ भेट हुन्छ मैले सोचेकी थिइन ।' जिङ रुन थालिन्, 'तिमीले किनिदिएको तीनवटै टिसर्ट त्यत्तिकै छ । अहिलेसम्म कसैले लगाएको छैन ।'
जोनचुङमा सन् २००१ को अन्तिमतिर आएको भीषण पहिरोमा वाङले काम गर्ने गरेको कम्पनीलगायत सयौँ घर पुरिएछ र त्यही पहिरोले बगाएछ जिङको प्रेमी वाङ लीलाई.....जिङको सपना र रहरहरूलाई ।
निकै पछि उनी केही शान्त र स्वाभाविक देखिइन् । बेलुका ट्युमेनको किनारमा बसेर हामीले सँगै कफी पियौँ । उनी मेरो नजिकै आइन्, 'तिम्रो त्यो झ्याप्पुले कपाल खोई त, मणि ?'
तर उनको अनुहारमा त्यो हाँसो धेरै बेर रहेन ।
राम्रो कथा पढ्न पाइयो लेखक
अतिथि — Tue, 06/15/2010 - 16:32
राम्रो कथा पढ्न पाइयो लेखक लाइ साधुवाद !
सिंहवाहिनी -१३- तेह्रौं अध्याय (देवी र दानवसेना बीच लडाइँ)
ब्रह्माण्डको ताण्डवमा अनौठो म
मोती पुरस्कारको ऐतिहासिक दस्तावेज
तीन हाइकु (लोकतन्त्र)